जिडब्लुएम को ‘टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प’ आउँदा एमआईको स्मार्ट टिभी जित्ने मौका - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
जिडब्लुएम को ‘टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प’ आउँदा एमआईको स्मार्ट टिभी जित्ने मौका
काठमाडौं / ग्रेट वाल मोटर्स (जिडब्लुएम) गाडीहरुको नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेता भि.जी. ईम्क्पेक्स प्रा.लि. ले आफ्नो दुई एसयूभी हरु – थर्ड जेन हवाल एच सिक्स र हवाल जोलायन का साथै पीक–अप पावर को ‘टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प’ आयोजना गर्ने भएको छ ।
आयोजना आज मङसिर ९ देखि शुरु भई मङसिर १४ गते सकिनेछ । यस क्याम्पमा इच्छुक जोसुकै पनि सहभागी हुन सक्नेछन् । सहभागि हुनका लागि इच्छुक व्यक्तिहरुले थापाथली, काठमाडौंस्थित ग्रेट वाल मोटर्सको शाोरुममा गएर बिहान १०ः०० बजेदेखि बेलुका ५ः०० बजे भित्र निशुल्क टेस्ट ड्राइभ तथा एक्सचेन्जको फाइदा लिन सक्नेछन् ।
इच्छुक सहभागीहरुले जिडब्लुएमको फेसबुक पेज जततउकस्ररधधध।ाबअभदययप।अयmरन्ध्ः।ल्ए मार्फत बुकिङ्ग गर्न सक्नेछन् ।
टेस्ट ड्राइभका लागि आउने प्रत्येक ग्राहकहरुले आकर्षक उपहार पाउनुका साथै द्धघ” को ःक्ष् स्मार्ट टि.भी. जित्ने मौका पाउनेछन् ।
क्याम्प अन्र्तगत ग्राहकहरुले गाडी एक्सचेन्ज गरी बुकिङ्ग गर्न सकिनेछ र आकर्षक बोनस, नगद छुट, निःशुल्क एसेसोरिज र सहज फाइनान्सिङको सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ । सबै ग्राहकहरुलाई गाडीहरुको विशेषता र फाइनान्सिङको बारेमा जानकारी गराउन अनुभवी विज्ञहरु उपस्थित रहनेछन् ।
जिडब्लुएमले अक्टोबर २०२१ मा जम्मा ११२,०६९ गाडी विक्री गरेको छ जसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्र १४,०४७ विक्री गरेको थियो । २०२१ को जनवरी देखि अक्टोवरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्री भएको ११२,०२० सहित ९९६,११४ गाडी विक्री भएको छ जुन ३०.३ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
चीनमा विगत ११ वर्ष देखि सबैभन्दा धेरै विक्री हुने नम्बर १ एसयूभी , हवाल ६५ लाख भन्दा धेरै सङ्ख्यामा विक्री भइसकेको हवाल अहिले ७० लाख पुगेको छ । ३५ लाखभन्दा धेरै विक्री भएको हवाल एच सिक्स ९५ महिनासम्म चीनमा सबैभन्दा धेरै विक्री हुने एसयूभी पनि हो ।
चीनको घरेलु बजारमा नम्बर १ स्थानमा रहेको पीक–अप पावर निर्यातमा पनि लगातार २४ वर्ष देखि सबैभन्दामाथि रहेको छ । घरेलु बजारको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पावरको विश्वव्यापी जम्मा विक्री १९ लाख एकाइ रहेको छ ।
चीनमा सबैभन्दा धेरै एसयूभी र पीक–अप उत्पादन गर्ने ग्रेट वाल मोटर्स १९८४ मा स्थापना भएको थियो । २००३ मा हङकङ्ग एच–शेयर २००३ मा शाङघाई ए–शेयर मा लिस्ट भएको जिडब्लुएम अटो उत्पादन गर्ने पहिलो चीनियाँ कम्पनी हो ।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने चीनको पहिलो अटो कम्पनीको श्रेय पनि जिडब्लुएम लाई नै जान्छ । यस कम्पनीको १०० भन्दा धेरै सहायक कम्पनीहरु रहेका छन्, ६०,००० भन्दा धेरै कर्मचारी छन् र विश्वको ६० भन्दा धेरै राष्ट्रहरुमा यसको उपस्थिति छ ।
# टेस्ट ड्राइभ
होण्डाको नयाँ एमेज २०२१ नेपाली बजारमा सार्वजनिक, यस्तो छ विशेषता
यामाहा रेजेडआर १२५ एफआइ माइलेज च्यालेन्ज, उच्चतम फ्यूल इफिसिएंसीका लागि र्याली
नाडाका प्रत्यासी उम्मेदवार थापा समूहद्वारा राजधानीमा अन्तर्क्रिया, गरे यस्तो प्रतिबद्धताको घोषणा
नाडाको आगामी निर्वाचनका अध्यक्ष पदका प्रत्यासी उम्मेदवार चौधरीले सार्वजनिक गरे आफ्नो प्यानल, कोको समूहमा ?